Istaraatiijiyad binary leh Moverage Average iyo MACD | vfxAlert official blog
Celceliska Dhaqdhaqaaqa & MACD
Celceliska Dhaqdhaqaaqa & MACD: Tilmaamayaasha la xaqiijiyay ee suuqa ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, waxay si fiican ugu shaqeynayaan kiis si habboon loo isticmaalo. Celceliska dhaqaajinta iyo oscillator MACD ee goob kasta dib ayey u dhacday, sida dhammaan tilmaamayaasha farsamo ee kale. Sidaa darteed, adeegsiga waqtiyada yar iyo xulashooyinka turbo oo aan socon karin wax ka badan 3-5 daqiiqo waxay siineysaa tiro calaamado been ah. Waxa ka reeban sharciyada waa xeelado la qabsi, sida barnaamijka vfxAlert, halkaas oo ay isku muujiyeen inay yihiin aalad dheeri ah oo lagu xaqiijinayo calaamadaha otomaatiga ah. Istaraatiijiyaddu waa isku-darka caadiga ah ee tilmaamaha isbeddelka (celceliska dhaqdhaqaaqa) iyo oscillator (MACD).
Nooca : xoqida iyo xulashada turbo;
Xilliga jaantuska :: 30 ilbiriqsi - M5;
Lammaanaha sarrifka : wax kasta oo laga reebo cryptocurrencies;
Waqtiga ganacsiga : Dhammaan maalinta ganacsiga marka laga reebo muddada wararka aasaasiga ah ee xooggan.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Miisaanka leh (EMA) :
Muddo = 7
Muddo MA dhakhso ah = 12
Gaabis MA xilli = 26
Signal MA muddada = 9
WAC: celceliska celceliska dhaqaaqa labadaba kor baa loo jeedaa. "WMA" WMA wuxuu ka gudbaa "gaabis" EMA xagga hoose ilaa kor. Astaamaha sawir-gacmeedka 'MACD histogram' ayaa ka sarreeya eber;
PUT: xaaladaha ka soo horjeedka - celceliska dhaqaaqa ayaa hoos u dhacaya, WMA xagga sare ilaa hoose waxay ka gudbeysaa EMA. MACD ayaa ka hooseysa eber.
Isgoyska 'MACD histogram' ee heerarka eber waxaa loo qaadan karaa inay tahay calaamad horseed ah, laakiin go'aanka ugu dambeeya ee lagu furayo booska lagu qaadanayo asaga oo ah vfxAlert signal of a Adaptive algorithm iyo WMA / EMA.
2-3 daqiiqo xulashooyinka turbo, xaaladaha kale oo aan ka yarayn 3-5 shumacyo waqtiga shaqada.
Mawqifku wuxuu ka furmayaa shumaca koowaad ka dib isgoyska celceliska dhaqdhaqaaqa, waana inuu qasab ku ahaadaa inuu ka kor maro WMA. MAs waxay leeyihiin daahitaan ka dheer MACD, markaa haddii xaaladda MACD lagu buuxiyo shumaca xiga, calaamaddan ayaa sidoo kale loo qaadan karaa inay furayso booska
Isticmaal mug mug leh oo ikhtiyaar ah ama u beddel iyada oo ku xidhan xoogga calaamadaha vfxAlert, sida fiidiyowga ku lifaaqan. Laakiin ha ku dabaqin Martingale adigoo labanlaabya heshiiska luminta - ilbidhiqsiyo iyo daqiiqado gudahood waxay badanaa keenaysaa luminta lacag dhigista. Istaraatiijiyaddu waxay bixisaa calaamado badan oo way fiicantahay in la galo oo keliya kuwa ugu kalsoonida badan;
Waa lagama maarmaan in la sugo isgoyska celceliska dhaqdhaqaaqa, xitaa haddii qiyaasta 'MACD histogram' ay ka gudubtay heerka eber haddii kale waa kaliya hal garaac wadne oo ma aha isbeddelka lagu furan karo ikhtiyaarka;
Joogitaanka isbeddel dheer, istiraatiijiyadda waxaa loo isticmaali karaa waqtiyada waaweyn, sida M5 iyo M15, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad xulato calaamadaha ku habboon ee istiraatiijiyadda la qabsiga vfxAlert. Dejinta tilmaamaha lama beddeli karo.
Ka ganacsiga warka ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu adag iyo istaraatiijiyadaha ugu badan ee xoqidda waxay siinayaan calaamado been abuur ah xilliyadan, laakiin haddii ay jirtay calaamado xoog leh ka hor bixitaanka, labadaba vfxAlert iyo tilmaamayaasha waxaa loo qaadan karaa inay tahay mid hoggaamineed;
Soo gaabinta "magaca" tilmaamuhu wuxuu u taagan yahay - Dhaqdhaqaaqa Isku Celceliska / Kala Fogaanshaha. Turjumaad ahaan - isugeynta / kala duwanaanta celceliska dhaqaaqa, waana tan uu ganacsaduhu muujinayaa - heerka kala duwanaanta khadadka Celceliska Dhaqdhaqaaqa. Waxaa soo diyaariyay Gerald Appel, oo isagu ka hor inta uusan xiiseynin ka ganacsiga ganacsiga, uu ahaa cilmi-nafsi yaqaan xirfad iyo sawir qaade xirfad ahaan. Si kastaba ha noqotee, laga yaabee inay ahayd habka hal abuurka iyo aqoonta cilmu-nafsiga aadanaha taas oo u oggolaatay qoraaga inuu abuuro oscillator u gaar ah.
Tilmaamaha MACD wuxuu ka kooban yahay histogaraam iyo seddex celcelis celcelis dhaqdhaqaaq ah: Khadadka MA ee jibbaarran oo leh muddo 12, 26 iyo 9. Dabcan, kaliya laba xariiq oo is rogrog ah ayaa ka muuqda jaantuska, hase yeeshe, qiimaha socodka dheer waxaa laga xisaabinayaa qiimaha khadka gaaban oo leh jilicsanaanta farqiga. Maxaa khadadka loo hagaajiyay? Thanks to jilicsanaanta ka saarista, qofku wuu arki karaa jihada dhabta ah ee isbeddelka, isaga oo ka saaraya dhammaan buuqa suuqa iyo khiyaanooyinka khiyaanooyinka ee xigashooyinka. Waa curiye fudud oo ka dhigaya tilmaame si caan ah maxaa yeelay ganacsade kasta ma jecla algorithms-yada qaab-dhismeedka kala duwan.
On shaxda qiimaha MACD, sida oscillator ah waxa uu ku yaalaa waxa loogu yeero "gunta hoose", oo muujinaya dhaqdhaqaaqa iyo jihada isbeddelka, sidaas darteed, adoo adeegsanaya oscillator shaxanka, waxaad arki kartaa sawirka soo socda:
Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah saddex calaamadood ayaa loo adeegsadaa:
Khadadka isgoysyada ee midba midka kale la jaheyn gaar ah;
Ka gudubka ka saarida heerka eber;
Dhammaan waxay kuxirantahay in MACD loo isticmaalo isku dhafan iyo waxa farsamo ahaan loola jeedo maadaama ay u shaqeyso sidii qalab lagu xaqiijinayo calaamadaha ganacsiga oo leh tilmaamayaal kale. Tilmaamahan wuxuu si wax ku ool ah uga shaqeeyaa suuq kasta, laakiin waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo qalab farsamo oo leh isbeddel si wanaagsan loo qeexay iyo isbeddel dhexdhexaad ah.